Nahatonga fahagagana maro ny fanompoana nataonay
ny mpahay siansa
CMO sy API serivisy tokana
Ny CMOAPI dia afaka manolotra serivisy manaraka ireto, izay tohanan'ny politika matanjaka amin'ny fiarovana ny fananan-tany (IP), ny fiantohana ny fitantanana ireo tetikasa amin'ny fitokiana mafy indrindra. Fampivoarana lalan-tsaina Synthetic optimization Process scale-up avy amin'ny grama ka hatramin'ny Metric Tons Exclusivity raha takiana fanohanana feno an-tsakany sy an-dàlana ny serivisy HPLC, GC-MS ary NMR FTE ho an'ny vokatra izay misy ny fizotran'ny asa famokarana dia afaka manolotra serivisy sy asa famokarana tolotra ny CMOAPI a tombantomban'ny mpanjifa manokana. Ho fanampin'ny serivisy voalaza etsy ambony dia manome serivisy mpamatsy akora ara-pitaovana mazotoana ihany koa izahay (tsy misy vidiny fanampiny) hahazoana antoka fa, na aiza na aiza dia mampiasa loharano fitaovana avo lenta fotsiny isika amin'ny vidin'ny tsena mifaninana. CMOAPI koa dia afaka manolotra serivisy fikarohana sy fampandrosoana fanao mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa manokana. Manana firaketana tsara an-tsoratra ny famahana ireo fanamby fikajiana synthetic tena sarotra ho an'ny mpanjifanay sy ireo tetik'asa mety miankina amin'ny mitovy habe (FTE) na vidiny isan'andro. Mifandraisa aminay mba hahitana ny fomba ahafahan'ny ekipa R&D mahay hahay hahavita ny tetikasanay manaraka ho fahombiazana farany.
Nandritra ny folo taona farany dia nanolotra serivisy fanaingoana sy fanamboarana manokana ny CMOAPI. Ny haavon'ny serivisy ataonay dia afaka miainga avy amin'ny batch kely misy miligram ka hatramin'ny taon-jotra amin'ny serivisy fanamboarana lehibe. Ny ankamaroan'ny mpanjifantsika dia any Amerika Avaratra, Eoropa, Aisa, ao anatin'izany ny Pfizer, lilly, roche, GSK, MSD, bayer ary orinasa malaza hafa. Ny serivisy rehetra sy ny serivisy fanamboarana anay dia tanterahana eo ambany fepetra tsiambaratelo. Ny ekipa tetik'asa mampiray anay dia tohanan'ny tarika mpahay simika manana traikefa sy mazoto. Miara-miasa amin'ny mpisera miaraka amina hafanana avy amin'ny -100˚C ka hatramin'ny 300˚C, ary mizana miainga amin'ny 5L ka hatramin'ny 5000L, ny sanda dia omena ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny sivana an-trano mahomby eo anelanelan'ny tetik'asa lehibe (hatramin'ny metatra taonina) ary mavitrika fanafody fanafody. Ny famokarana dia atao ao amin'ny trano fanamboarana anay tanteraka. Manamboatra ny rojistika famatsiana ho an'ny simika famokarana izahay mba hihaona amin'ny famoahana ny tetik'asa manokana miaraka amin'ny hafainganam-pandeha ambony indrindra sy ny vidiny raha toa ka mahafeno ny fenitra ambony indrindra momba ny fiarovana sy ny fanarahan-dalàna. Ny fizotran'ny famokarana Optimized dia mamela ny haben'ny batch mora ampiasaina sy ny kalitaon'ny vokatra mihatsara. Ny dingana rehetra dia natao mba hahafahana mameno ny fepetra arahina amin'ny fitsipika.
Ny CMOAPI for Drug Discovery dia vahaolana mifototra amin'ny rahona izay manadihady fahalalana sy angon-drakitra hanehoana fifandraisana fantatra sy miafina, izay manampy amin'ny fampitomboana ny mety hisian'ireo lozam-pahaizana siantifika. Ny sehatra dia mamela ny mpikaroka hamorona hypotheses vaovao noho ny fanampian'ny fomba fijery mavitrika, ny faminaniana miorina ary ny fanodinana fiteny voajanahary voaofana ao amin'ny sehatry ny siansa. CMOAPI momba ny zava-mahadomelina dia afaka manafaingana ny fahafantarana ireo mpifaninana mpifaninana amin'ny zava-mahadomelina sy ny lasibatra amin'ny zava-mahadomelina amin'ny alàlan'ny fampiasana ny habetsaky ny angon-drakitra lehibe.
Ny ekipa fampandrosoana momba ny simika dia ahitana mpahay siansa 50 mahery ao amin'ny firenentsika, mihoatra ny fanantenana amin'ireo tetikasa sarotra indrindra. Miara-miasa amin'ny laboratoara misy ny zavakanto vita amin'ny fizarana farany sy ny fampitaovana an-tsoratra, isika dia manatanteraka ny fitsikilovana ny lalana, ny fampandrosoana haingana, ny fanatsarana ny toe-javatra fanehoan-kevitra ho an'ny fitsinjarana ny fitaovana ho an'ny fitsapana mialoha, na ny famokarana goavana. Miaraka amin'ny fanohanan'ny ekipa manam-pahaizana arahinay, ny injeniera simika ary ny matihanina QA, dia mamolavola haingana sy mahomby isika amin'ny famokarana famokarana manan-kery hamenoana ny filanao.